Wasiirka arrimaha dibedda Iswiidhen oo isniinta u ambabaxaya Iiraan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka Arrimaha Dibedda Carl Bildt oo uu wareysaneyso weriyaha Sveriges Radio International Zinat Hashemi. Sawirle: SR International
Wasiirka arrimaha dibedda Iswiidhen oo isniinta u ambabaxaya Iiraan
La cusbooneeyay fredag 31 januari 2014 kl 15.31
La daabacay fredag 31 januari 2014 kl 09.02
Wasiirka arrimaha dibedda Iswiidhen Carl Bildt ayaa isniinta foodda nagu soo haysa booqasho ugu kicitimaya dalka Iiraan. Waxayna noqoneysaa markii ugu horreysa oo wasiirka arrimaha dibedda oo Iswiidhen ka socda oo booqasho ku tagto dalkaas intii ka dambeysey sannadkii 2002, kolkaas wasiiraddii arrimaha dibedda ee xilligaas Anna Lindh ay booqatay. Xiriirka u dhexeeya Iiraan iyo Waddamada galbeedka ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dambeeyey markii madaxweynanimada loo doortay Xasan Roxaani sannadkii hore. Carl Bildt ayaa rajeynaya in uu inta halkaas booqashada ku joogo uu la soo qaado arrimo muhiim ah.
- Waxaa ugu badnaan doona su’aalo la xiriira sancada nukliyeerka balse waxaa kaloo u baahanahay inaan isla soo qaadno baahida loo qaabo wadahadalo taabanaya arrimo badan oo ay ka mid yihiin Afqaanistaan iyo Suuriya. Waxay kaloo noqon karaan wadahadlo u dhexeeya Iiraan iyo Midowga Yurub oo ku saabsan xuquuqda aadanaha. Halkaas waxaa nooga soo baxaayey astaamo yididdilo leh, laakiin weli lama gaarin meeshii la hiigsanayey.
Dhanka kale waxaa booqashada Carl Bildt ka gadooday dad badan oo iiraaniyiin u badan yihiin oo ka walaacsan sida ay Iiraan weli ugu tumato xuquuqda aadanaha. Iiraan ayaa noqoneysa dal labaad oo Shiinaha ku xiga marka laga hadlayo dadka xukun dil ah lagu fuliyo. Bishaan Jannaayo oo qura waxaa qudha laga jaray afartameeyo qof oo dil lagu xukumay.